ONU | mandimby maharo
Posted on 26 September 2012 26 September 2012 by Mandimby Maharo
Anio 26 Septambra tolabandro no handray fitenenana eo amin’ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana by Fat Andry Rajoelina. Fivoriana faha 67 izay atao any New York misy ny foibe toeran”ity vondrona ity . Faharoa kosa ho an’ny Fat no nanatrika ny fivoriana fanao isan-taona toy izao. Mazava ho azy fa dia hiompana amin’ny fanatanterahana ny tondrozotra sy ny hanomanana fifidianana no ho vontoatin’ny lahateny izay ho ataony amin’ity taona ity. Tondro zotra izay nahazo ny fankatoavan’ny FM.
Raha ny Firenena Mikambana sy ny andraikitra raisina amin’ny famahana ny olana eto amitsika manokana no resahina dia mpanelanelana.Ttsy mpandray anjara mivantana amin’izany fanelanelanana izany nefa izy. Araka ny fenitra tokoa dia ireo vondrona isam-paritra aloha no miditra an-tsehatra voalohany amin’ny famahana olna iray izay miseho eo amin’ny firenena mpikambana ao aminy. Izay fenitra izay no nahatonga ny Sadc sy ny OIF ary ny Vondrona Afrikana ho lohan’ny mpanelanelana iraisam-pirenena eto.
Tsy azo tsiniavina kosa nefa ny lanja mety ho entin’ny fankatoavanity Fibambanana iraisampirenena izay mahavory firenena mihoatra ny 200 ity.
Noho io maha be sahanina azy io indrindra nefa koa no maha sarotra ny asany. Raha ny olana misy eto ambonin’ny tany dia azo lazaina ga kely sy bitika ihany ny misy eto Madagasikara. Ao ohatra ny ady any Siria, ny olana atsy Mali, ny fiantsina ataon’ny Iransy ny olana lava reny ao Palestina sy Israely. Ireo no hita fa hibahana mandritra ity fivoriana ity satria dia efa lasa lavitra ny fandraisan’ny FM nymomba ireo raharaha ireo.
Ny hany azotsika malagasy ho resahina sy antenaina izany dia ny mety hisian’ny fanampiana amin’ireo loha-hevitra roa manahirana antsika ireo. Nisy tojoa manko ny fampanantenana nomen’ity vondroçna ity ny hanohana antsika amin’ny fifidianana. Efa any ampelatanan’izy ireo rahateo ilay drafitrs amin’ny fanohanan ny ambaratongamù-pifidianana (Pacem). ary inoana fa efa eo ampandinihana azy izy ireo na dia mbola misy fanankihanana avy aty amin’ny Fat aza. Kiana izay mipetraka satria dia ambara fa novolavolan’ny FM irery ity drafitra ity.
Tags: politiqueCategories: politique, Uncategorized Aside
2 thoughts on “ONU”
Pingback: Fintim-baovao « mandimby maharo